Fety miaraka amin’ny solika mora | NewsMada
Fety miaraka amin’ny solika mora
Miandry fatratra ny fotoana hampidinan’ny fanjakana ny vidin-tsolika ny rehetra. Tsiahivina fa tsy nihetsika mihitsy ny vidiny tato anatin’ny volana maro, raha tsy hiteny afa-tsy ny tamin’ity taona 2019 ity. Na izany aza, nanome toky ny filoham-pirenena, fa tsy maintsy hampidinina ny vidin-tsolika, mba hitsinjovana ny maro an’isa ary nohamafisiny tamin’ny zoma lasa teo.
Fihaonana voalohany nataony tamin’ireo mpandraharaha solika, ny alatsinainy teo, ary mitohy anio alarobia. Midika izany fa vidin-tsolika mora takatry ny fahefa-mividin’ny Malagasy, toy ilay efa ataony amin’ny “vary mora ihany”. Izany rahateo no andrasan’ny vahoaka tsy ankanavaka, satria miankina amin’io vidin-tsolika io avokoa ny vidin-javatra rehetra. Tsiahivina fa anisan’ny fepetra takin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, indrindra ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI) sy ny Banky iraisam-pirenena (BM), ny tsy hanentsenan’ny fanjakana ny banga, hanampiana vola ny vidin-tsolika sy ny sehatry ny angovo, indrindra ny Jirama. Ho an’ity farany, efa nahenan’ny fanjakana izany fanampiana izany, fa tanjona ny hanafoanana azy tanteraka amin’ny taona 2020, ary tokony hifandanja ny vola miditra sy mivoaka ao amin’ny Jirama.
Ho an’ny sehatry ny solika kosa, azo lazaina fa tsy manampy intsony ny fanjakana, saingy hita fa mbola lafo ny vidiny aroson’ny mpandraharaha tsy miankina ary feran’ny fanjakana amin’ny alalan’ny OMH avy eo.
Efa manana fikasana ny hanafatra solika mivantana any ivelany rahateo ny filoha, nandritra ny fivahiniany tatsy Afrika, ny fiandohan’ny taona teo. Lalan’ny tsena malalaka rahateo ny hamaroan’ny mpifaninana, satria iaraha-mahalala fa mitovy avokoa ny vidin-tsolika eny amin’ireo mpanjinjara efatra.